Arday baratay Qur’aanka Kariimka oo shahaadooyin la guddoonsiiyay – Radio Muqdisho
Arday baratay Qur’aanka Kariimka oo shahaadooyin la guddoonsiiyay
Xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay Qur’aanka kariimka ah oo ay ka qeybgaleen culimaa’udiin iyo waalidiin ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Mu’asasad Ashadimidi ayaa maanta shahaadooyin guddoonsiisay 37 ardayda oo isugu jirta gabdho iyo wiilal, kuwaasi oo bartay xifdinta Qur’aanka Kariimka ah, waxaana munaasabaddii ardayda loo qabtay ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada, Waalidiin iyo mas’uuliyiin kale.
Badal Maxamuud Sugale oo ah madaxa Mu’asada ayaa sheegay in ardayda ay wax bareen looga fadhiyo in xifdinta Qur’aanka ay sii baraan dadka kale ee aan fursadda u helin in ay Mu’asasada yimaadaan.
Mid ka mid ah Waalidiinta goobta ka hadlayay ayaa bogaadiyay maamulka Mu’asasada Ashadimidi, sida ay u taaganyihiin in carruurta ay baraan Qur’aanka Kariimka ah.
Macalin Aadan Maxamed Cigaal Maamulaha Jaamacadda bariga Afrika qeybteeda gaalkacyo ayaa xusay inay sameyn doonaan mu’asad la socoto ardayda wax ka baratay dugsiyada Qur’aanka.
DAAWO SAWIRRADA: Madaxweynaha oo Golaha Wasiirada kula dardaarmey dardar gelinta hawlaha dowladda